Iyo yemagariro mamiriro ndiyo yakakosha ruzivo rweApple Music | IPhone nhau
Apple Music ikozvino yasununguka kupfuura nakare kose
El Apple inomhanyisa mimhanzi sevhisi ndechimwe cheyakagadziriswa mune dzese mharidzo kubvira payakatangwa, uye kubheja kubva kuCupertino kwakakura kwazvo kune ino chikuva. Naizvozvo, uye zvingave sei neimwe nzira, yave zvakare iine nguva yayo yekukurumbira mune yanhasi chiitiko. Pakave pasina kuve nemanyowani mazhinji akaunzwa, asi ivo pasina mubvunzo vanouya kuzogara.
Chekutanga pane zvese, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Apple Music yakatowana vanopfuura mamirioni makumi mairi nevatengi kutenderera pasirese, chimiro chenyeredzi. kana isu tichifunga nezve hurefu hurefu chebasa iri asi kuti hachina kunyanya kana tichifunga nezvehuwandu hwePhones dzinotengeswa munyika. Ngazvive sezvazvingaite, iyo data iriko uye munhu wese anogona kutora yavo vega mhedziso.
Chaizvoizvo, hutsva hukuru hweApple Music yakaderedzwa kusvika mukugona kugovana neshamwari zvatiri kuteerera, ona zvavari kuteerera uye nekuwana mimhanzi mitsva. Ichokwadi ndechekuti mune aya marudzi emaapps margin yekuvandudza haana kukura sevamwe, asi zvirokwazvo Izvo hazviite kunge kuti nhau dziri kumusoro kune izvo izvo munhu angatarisira kubva kuApple paWWDC.
Zvisinei, uye zviripachena, pane zvinhu zvinozochinja pakati pezvino nezvinoitika munaGunyana, apo patichasangana nePhones nyowani, kuti tione zvimwe zvinowedzerwa mukushambadzira kwemimhanzi yeApple. Eheka, staticity haisi sarudzo mumusika unowedzera zvine hukasha uye apo vatengi vane zvinyunyuto zvishoma nezvekuchinja kubva papuratifomu kuenda kune imwe kana mamiriro ezvinhu ari nani zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple Music ikozvino yasununguka kupfuura nakare kose
AirPlay 2 semubatsiri weKeKKit muIOS 11
Siri anokura uye anochinja izwi rake muIOS 11